ညီလင်းသစ်: April 2013
နောက်တစ်နေ့ကတော့ ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ လည်ပတ်ရမယ့် နေ့ပါပဲ၊ အရင်ရက်တွေတုန်းက ဆုံခဲ့ရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက ကိုယ်စီ အလုပ်သွားကြရလို့ ဘယ်သူမှ မလိုက်နိုင်တော့ဘူး၊ တစ်နေ့တာကို စတင်ဖို့အတွက် အနည်းငယ် ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပင်နီဆူလာကို အရင်ဆုံး လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာပဲ မနက်စာစားဖို့ ရည်ရွယ်တာလည်း ပါတာပေါ့...၊
ပင်နီဆူလာရဲ့ မနက် ၉ နာရီဟာ တကယ့်ကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပါပဲ၊ တစ်ဆိုင်၊ နှစ်ဆိုင်လောက်ကလွဲပြီး ဆိုင်ခန်းတွေ အားလုံးလိုလို ပိတ်ထားဆဲပဲ၊ လူတိုင်းကိုယ်စီက အလုပ်,လုပ်ကြရလို့ စောစောဖွင့်လည်း ဈေးဝယ်သူ မရှိမယ့်အတူ အေးအေးလူလူနဲ့ ဖွင့်ကြတာများလား၊ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် တက်ရင်း ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တံခါးတွေကိုပဲ ကျနော်လိုက်ကြည့်နေမိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များစွာ ကတည်းက ပြောသံကြားဖူးတဲ့ ပင်နီဆူလာ၊ ဓါတ်ပုံထဲမှာ တစွန်းတစ မြင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ပင်နီဆူလာ၊ ရွှေတို့ရဲ့ စုရပ်လို့ဆိုတဲ့ ပင်နီဆူလာ...၊ အဲဒီ ပင်နီဆူလာထဲကို ကျနော်တကယ်ရောက်နေပါလား လို့တွေးရင်း တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ စင်္ကြံကနေ ငုံ့ကြည့်နေခဲ့ မိတယ်၊
ကဲ.. ကြည့်ပါဦး၊ တစ်ထိုင်ထဲမှာ အကုန်ရနိုင်တဲ့ ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုမျိုး ကမ္ဘာပေါ်မှာ များများစားစား ရှိမယ်မထင်ဘူး၊း) ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား မတူတာက ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ အခက်အခဲ ပြေလည်သွားဖို့က အဓိက မဟုတ်လား၊ လာသာလာခဲ့...၊ One stop service နဲ့ အကုန်အဆင်ပြေသွား စေရမယ်..၊
‘ရဲရင့်’ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ၊ ကျစိမ့်တစ်ခွက် မှာပြီး ကျွန်းကလေးပေါ်က မနက်ခင်းကို မြန်မာဆန်ပစ် လိုက်တယ်၊ စင်္ကာပူက ကျနော် စားသောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သတိထားမိတာ တစ်ခုက ပါးစပ်သုတ်ဖို့ လက်သုတ်ပုဝါ မတွေ့မိတာပါ၊ တစ်ခုခု စားသောက်လို့ ပါးစပ်သုတ်မယ်ကြံတိုင်း စားပွဲပေါ်မှာ ဘာမှမတွေ့ပါဘူး၊ ကိုယ်နဲ့အတူ စားသူတွေကို မသိမသာ အကဲခတ်ကြည့်တော့ အားလုံးက တစ်ရှူးထုပ်လေးတွေ ကိုယ်စီ ဆောင်ထားကြတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒါနဲ့ ခရီးဆောင် သေတ္တာထဲကို ပြန်ပြီး မွှေနှောက်ရှာကြည့်တော့ ခရီးမှာအအေးမိရင်၊ နှာစေးရင် လိုလိုမယ်မယ် သုံးရအောင် ထည့်လာမိတဲ့ တစ်ရှူးထုပ်ကလေး တစ်ထုပ်ကို သွားတွေ့တယ်၊ အဲဒီအထုပ်လေးကို ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားလိုက်တော့မှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်းသားတစ်ပိုင်း ဖြစ်ပြီဆိုပြီး စိတ်ကျေနပ်သွားတော့တယ်...၊း)
အစီအစဉ်က MBS အပေါ်က Skypark ကိုသွားဖို့ ဆိုတော့ ရထားစီးရအောင် စီးတီးဟောလ် ဘူတာကို သွားတယ်၊ အဲဒီမှာ ရယ်စရာလေးတစ်ခုကို ကြုံရသေးတယ်၊ မြေအောက်ထဲဆင်း၊ ဘူတာဂိတ်ထဲလည်း ဝင်လိုက်ရော ယူနီဖောင်းဝတ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ကျနော့်အရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ̔ကျမက ဒီဘူတာရဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူပါ၊ ရှင့်ရဲ့ အိတ်ကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်ချင်လို့ ဒီဖက်ကို ခဏလေးကြွပါ̕ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ အိုင်ဒီကဒ်ကို ပြလည်းပြ၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက စားပွဲတစ်ခုကိုလည်း ညွှန်ပြတယ်၊ ကျနော် သိလိုက်တယ်၊ ကျနော့်လည်ပင်းမှာ လွယ်ထားတဲ့ ကင်မရာရယ်၊ ကျောမှာပိုးထားတဲ့ လေးထောင့်ကျကျ ကင်မရာအိတ်ရယ်ကို ကြည့်ပြီး မသင်္ကာ ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာ...၊ အမျိုးသမီးကတော့ ဆက်ပြောတယ်၊ အခုလို စစ်တာကို စိတ်မရှိဖို့နဲ့ ဒါဟာ မသင်္ကာလို့ မဟုတ်ဘဲ random check ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း..၊ ဒါနဲ့ သူပြတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာပဲ ကင်မရာအိတ်ကို တင်ပြီး ဖွင့်ပြလိုက်တယ်၊ မှန်ဘီလူးတွေကို သာမန်ကာလျှံကာ ပြပြီးတော့ သူ စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သေသေချာချာ ထုတ်ပြ လိုက်တယ်၊ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဝိုင်ယာကြိုးတွေနဲ့ ဓါတ်ခဲတွေ...၊ ကျနော်က ဒီကြိုးတွေဟာ ကင်မရာနဲ့ကွန်ပျူတာ၊ ကင်မရာနဲ့ဖလက်ရှ် ဆက်သွယ်တဲ့ ကြိုးတွေဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ ဓါတ်ခဲတွေကတော့ ဖလက်ရ်ှအတွက် အပိုဆောင်ထားတဲ့ ဓါတ်ခဲတွေ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တယ်၊ သူ နည်းနည်းစိတ်အေးသွားပုံ ရတယ်၊ ပစ္စည်းတွေကိုတော့ တစ်ခုမှ ကိုင်မကြည့်ဘူး၊ ကျနော့်ရဲ့ အိုင်ဒီကဒ်ကို တောင်းကြည့်တယ်၊ ပြီးတော့ တဆက်ထဲ ̔ရှင်က ဓါတ်ပုံဆရာလား̕ လို့ မေးတယ်၊ ကျနော်ကလည်း ̔ဆိုပါတော့ဗျာ̕ ပေါ့လေ၊ အဲဒီမှာ သူက ̔ရှင် ဒီဘူတာကိုတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မရဘူးနော်၊ ရိုက်ချင်ရင် ဟောဟိုက ရုံးခန်းမှာ ခွင့်သွားတောင်းဖို့ လိုတယ်̕ လို့ ပြောတယ်၊ သူ့လေသံက သူတာဝန်ယူရတဲ့ ဘူတာထဲမှာ ကျနော် ဓါတ်ပုံတွေ လျှောက်ရိုက်နေမှာကို စိုးရိမ်နေတဲ့ လေသံ..၊ ကျနော်က ̔ဟုတ်လား၊ ကျနော်က အခုလေးတင်ပဲ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ၊ နှစ်ပုံလောက် ရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးနေတာ၊ အင်း..ဘူတာတွေ၊ ရထားတွေက ကျနော့်ရဲ့ အဆိုင်းမင်န့်ထဲမှာတော့ မပါ,ပါဘူး၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဝင်စားလို့ အမှတ်တရ ရိုက်သွားချင်တာ သက်သက်ပါ၊ ကျနော် မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အခုဒီက ဘူတာတွေ၊ ရထားတွေလောက် သန့်ရှင်း၊ ခေတ်မီတာ မတွေ့ဖူးသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက မရိုက်ရဘူး ဆိုတော့လည်း မရိုက်ရုံပဲ ရှိတာပေါ့ဗျာ̕ လို့ ပြောပြီး ပစ္စည်းတွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်သိမ်းနေ လိုက်တယ်၊ လုံခြုံရေး အမျိုးသမီးက ဘာမှဆက်မပြောဘဲ ကျနော့်မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်နေတာ မျက်လုံးထောင့်ကနေ မြင်နေရတယ်၊ ကင်မရာအိတ်ကို ဇစ်ဆွဲပိတ်လိုက်တဲ့ အခိုက်မှာပဲ သူ ကျနော့်အနားကို ကပ်လာပြီး လေသံတိုးတိုးနဲ့ ‘ဒီမှာ.. ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ၊ နှစ်ပုံလောက်ပဲ ရိုက်မှာဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီဘူတာထဲမှာ လုံခြုံရေး ကင်မရာတွေတော့ အများကြီး ရှိတယ်၊ ရှင် ရိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီကင်မရာတွေရဲ့ အရှေ့မှာတော့ မရိုက်နဲ့ပေါ့၊ ဟုတ်ပြီလား...၊ ပြီးတော့ ကျမက ဒီလိုပြောတယ်လို့လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော်’ ပြောတယ်၊ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ညိုနုနု မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးရိပ်ကလေး တွေ့လိုက်ရတယ်၊ ကျနော်က ̔ဒါဆိုလည်း ကျေးဇူးပါဗျာ၊ စိတ်ချပါ...၊ ကျနော်က ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်မယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေဗျာ̕ လို့ နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်လာခဲ့တော့တယ်၊
စင်္ကာပူမှာ ရထားစီးတာ သုံးလေးခါလောက်လည်း ကျရော ရထားထဲဝင်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ လက်က ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ဖုန်းကို အလိုလို စမ်းမိလျက်သား ဖြစ်နေတတ်တယ်၊ ရေမြေလိုက်သွားတာ ထင်ပါရဲ့...၊း) အစတုန်းက ရထားထဲရောက်ရင် ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ကြည့်နေတာဆိုလို့ ကျနော်တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်၊ အားလုံးလိုလိုက ဖုန်းတွေ၊ တက်ဘလက်တွေကနေ မျက်နှာကို မခွာဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကိုယ်စီကို လူတွေအများကြီးက တချိန်တည်း၊ တပြိုင်တည်း သုံးနေကြတာ ဒါပထမဆုံး မြင်ဖူးတာပါပဲ၊ ရထားတွေကတော့ စီးရတာ အတော့်ကို အဆင်ပြေပါတယ်၊ ရထားတွေဆုံတဲ့ ဘူတာရုံကြီးတွေမှာ ရထားပြောင်းစီးတဲ့လူတွေ အဆင်ပြေအောင် အသွားရထားနဲ့ အပြန်ရထားကို အထပ်တွေခွဲထားတာ၊ ရထားက ဘူတာတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်လာတဲ့ အခါမှာ တံခါးဖွင့်မှာက ဒီဖက်ခြမ်းလား၊ ဟိုဖက်ခြမ်းလား ဆိုတာကို ဖော်ပြတာ.. စတဲ့ အသေးစိတ်လေးတွေကအစ စနစ်ကျကျ ပြင်ဆင်ထားတာ တွေ့ရတယ်၊ တစ်ခါမှာ မောမောနဲ့ ရထားထဲမှာ ရေဗူးထုတ်သောက်မယ် လုပ်တော့ အဖော်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ညီမငယ်က ရထားထဲမှာ ရေသောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ လှမ်းပြောတယ်၊ ပထမတော့ ကျနော်က သူနောက်နေတာ ထင်လိုက်သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် နံရံမှာ ရေးထားတဲ့ ဒဏ်ငွေတွေကို တွေ့တော့ ရေသောက်ချင်စိတ်ကို ကမန်းကတန်း ပြန်မျိုချလိုက်ရတယ်၊ ဂလု....၊
ရောက်တဲ့နေ့ကတည်းက နေ့တိုင်းလိုလို ဘယ်နားသွားသွား တွေ့နေရတဲ့ Skypark ကောင်းကင်ဥယျာဉ်ထဲကို ပြန်ခါနီးမှ တက်ဖြစ်ပါတယ်၊ Tower3ကနေ တက်ရပြီးတော့ ဝင်ကြေးက ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးရပါတယ်၊ ဓါတ်လှေကားကို လူတစ်ယောက်က မောင်းပြီး လိုက်ပို့ပေးတယ်၊ ကျနော်တို့ ခပ်ငယ်ငယ် ဓါတ်လှေကားတွေ ပေါ်ကာစမှာလို မောင်းသူတစ်ယောက် သီးသန့်ထားတာ အမှတ်ရစရာ..၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီခပ်ငယ်ငယ်က ဓါတ်လှေကားတွေနဲ့တော့ အကွာကြီးကွာသွားပြီ၊ မြေပြင်ကနေ Skypark ရှိတဲ့ ၅၆ ထပ်ကို ၃၂ စက္ကန့်ပဲ ကြာပါတယ်၊
ကောင်းကင်က ကြည်လင်သာယာတဲ့ ကောင်းကင်ပြာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခဏတာပဲ လာရတဲ့သူအဖို့ဆိုတာ နက္ခတ်ရွေးခွင့်တော့ ဘယ်ရှိမှာလဲ၊ Infinity pool မှာတော့ ရေကူးနေတဲ့သူတွေက အေးအေးလူလူ...၊ အရပ်ရှစ်ခွင်ကို လှည့်ပြီး ကျနော်လည်း infinity အထိကို အေးအေးလူလူ ငေးကြည့်နေလိုက်တယ်၊
ဒီဖက်အခြမ်းက အောက်ဖက်မှာတော့ မနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့ Gardens by the bay...၊ နေရာအနှံ့ မရောက်ခဲ့ရတဲ့ Gardens တစ်ခုလုံးကို အခုလိုမှပဲ မျက်လုံးနဲ့ ခြုံငုံလည်ခွင့် ရတော့တယ်၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ပင်လယ်ထဲမှာ သင်္ဘောပေါင်းစုံက ကစားစရာ အရုပ်လေးတွေလို အစီအရီ...၊
ကောင်းကင်ဥယျာဉ်ထဲကနေ မြင်ရသလောက်ကို ကျနော်လိုက်ကြည့် နေမိတယ်၊ လာဖို့ကို အချိန်အကြာကြီး စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်းကလေးက အခုတော့ ကျနော့်ရဲ့ အောက်ဖက်မှာ...၊ မိုးမျှော်တိုက်တာတွေ၊ သိပ်သည်းတဲ့ လူနေအဆောက်အဦးတွေက မျက်စိတဆုံး..၊ အဲဒီတိုက်တာတွေမှာ ကျနော်ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ နေကြတယ်၊ အားလုံးကို မဟုတ်သည့်တိုင် သူတို့ထဲက တချို့ကို ဆုံခွင့်ရတာ ဝမ်းမြောက်စရာပါ၊ ကျနော်စကားပြောကြည့် ရသလောက် ညီအစ်ကိုမောင်နှမ တစ်ချို့က ကျွန်းကလေးကနေ ထွက်ခွာဖို့ အစီအစဉ် ရှိကြတာ သိရတယ်၊ တချို့က ဇာတိမြေဆီ..၊ တချို့ကတော့ နောက်ထပ်နေရာသစ်ဆီ..၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟောဒီကျွန်းကလေးပေါ်မှာ သူတို့ထဲက တချို့နဲ့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ဆုံဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ၊
အဆောက်အဦးတွေ အများကြီးကြားမှာ အခုတော့ ပင်နီဆူလာကို ကျနော်ရှာတတ်သွားပြီ၊ ဟိုး.. ခပ်လှမ်းလှမ်း အောက်ဖက်က အဲဒီအဆောက်အဦးထဲမှာ မြန်မာစကားသံတွေ ရှိတယ်၊ မြန်မာစာအုပ်တွေ ရှိတယ်၊ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဆုံတွေ့မှုတွေ ရှိတယ်၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်တွေ ရှိတယ်၊ လက်ဖက်ရည်တွေ၊ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှိတယ်၊ အဆင်မပြေမှုတွေကို အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အားပေးမှုတွေ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေကို ဖြေသိမ့်မှုတွေ ရှိတယ်၊ မြန်မာတို့ရဲ့ မောင်းနှင်အားတွေ ရှိတဲ့ ပင်နီဆူလာကို နှုတ်ဆက်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကျနော်ကြည့်ခဲ့တယ်၊ Till we meet again Peninsula...!
စင်္ကာပူမှာ သုံးလေးခါလောက်တော့ တက္ကစီ စီးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ပထမဦးဆုံး စီးဖြစ်တဲ့ တက္ကစီမှာ မောင်းသူကိုလည်း မြင်လိုက်ရရော ကျနော် အံ့သြသွားတယ်၊ ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းနဲ့ အတော့်ကို တူလို့ပါ၊ မျက်နှာကျအပြင် ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားပါ တူတယ်လို့ ဆိုရမယ်၊ ဒုတိယတစ်ခါ စီးပြန်တော့ မောင်းသူက စာရေးဆရာ အီကြာကွေးနဲ့ တူနေပြန်ရော..၊ ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်နဲ့အတူပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ̔မင်းတို့ စင်္ကာပူမှာ တက္ကစီမောင်းသူတွေက တကယ့်နာမည်ကြီးတွေ ပါလား̕ လို့ နောက်မိတယ်၊ အဲဒီ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ နောက်တစ်ခါ စီးဖြစ်ပြန်ရော၊ ဒီတစ်ခါတော့ ကားပေါ်ရောက်ရောက်ချင်း တက္ကစီဆရာကို အားလုံးက လှမ်းကြည့်ပြီးတာနဲ့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ရယ်မိကြတယ်၊ ကားဆရာက ခင်ဝမ်းနဲ့ တူနေတာကိုး..၊ တက္ကစီတွေ စီးဖြစ်တော့ တက္ကစီစီးတဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ အစ်မခင်ဦးမေကို သတိရချင်စရာ...၊
နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ အော့ချတ်ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်သွားတယ်၊ ပထမတစ်ခေါက် ရောက်တုန်းက ချုပ်ညရီတွင် ဖြုတ်ချည်းမြင်သည် ဖြစ်သွားလို့ အခုတော့ လင်းလင်းချင်းချင်းရှိတဲ့ နေ့လယ်ခင်းမှာ အရောက်သွားလိုက်တယ်...၊
ကျနော်သွားတာက စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မဟုတ်လို့လားတော့ မသိဘူး၊ လူတွေနဲ့ တိုးမပေါက်အောင် ဖြစ်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လမ်းလျှောက်လို့ ကောင်းရုံပါပဲ၊ နာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေ၊ အေးစိမ့်နေတဲ့ လေအေးစက်တွေနဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေနဲ့ အောချတ်ဟာ သွေးကြီးနေတယ်၊ ကာလသားတစ်သိုက် စတာနောက်တာကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရှင်လောင်းလှည့်ကာနီးဆဲဆဲ ကနွဲ့ကလျလေး ရပ်နေတဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင် လုံမပျိုတစ်ယောက်လို အောချတ်ဟာ မျက်နှာချေအဖွေးသားနဲ့ လှလို့...၊
အောချတ်ဘူတာကနေ ဒိုဘီဂေါ့ဘူတာ ရောက်တဲ့အထိ ကျနော်လျှောက်ခဲ့တယ်၊ အော့ချတ်မှာ အတောမသတ်နိုင်ဘဲ မောမတတ်ကို လျှောက်ခဲ့တာ...၊း) အရိပ်ရတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေ တဖက်တချက် စိုက်ပျိုးထားလို့ ပူတယ်ဆိုသည့်တိုင် လမ်းလျှောက်ရတာ နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းတာတော့ အမှန်ပါ...၊
အဲဒီလို လျှောက်နေရင်းပေါ့...၊ တစ်နေရာ အရောက်မှာ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်က ကျနော့်အရှေ့တည့်တည့်ကနေ ပိတ်ရပ်ပြီး သူ့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက် လိုက်တယ်၊ တကယ့်ကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း မပြောမဆိုနဲ့...၊ ဘယ်ရမလဲ..၊ သူရိုက် ကိုယ်ရိုက်ပေါ့၊ ကျနော်ကလည်း တစ်ပုံပြန်ရိုက်လိုက်တယ်၊း)
အော့ချတ်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက်မှာ ကုန်တိုက်တွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်ကုန်တိုက်မှမဝင်၊ ဘယ်မှာမှ မရပ်ခဲ့ဘူး၊ ကျနော်က ဈေးဝယ်ဖို့လည်း အစီအစဉ်မှ မရှိဘဲကိုး၊ ဒါပေမယ့် တစ်နေရာရောက်တော့ ကုန်တိုက်တစ်ခုရဲ့ တံခါးရှေ့က အဖြတ်မှာ အထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အဲကွန်းလေ အေးစိမ့်စိမ့်က ကျနော့်ကို ခဏလောက် ဝင်နားလှည့်ပါဦးလားလို့ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ၊ အဲဒီတော့မှ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲနစ်နေတာ သတိပြုမိတယ်၊ အပူဒဏ်သက်သာအောင် ခဏတော့ ဝင်ခိုဦးမှပါလေလို့ စဉ်းစားပြီး အထဲဝင်လိုက်တဲ့ အခိုက်မှာပဲ အဲဒီ မာ့ခ်ရှေး စားသောက်ဆိုင်နဲ့မှ တည့်တည့်ကြီးကို ဝင်တိုးတော့တယ်၊ ̔ငါ့နှယ်နော်.. တကူးတက လိုက်ရှာရင်တောင် တွေ့ချင်မှတွေ့မှာ̕ လို့ တွေးမိပြီး ကျနော် ရယ်ချင်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ ပျော်လည်းပျော်သွားတယ်၊ စင်္ကာပူက မောင်နှမဘလော့ဂါတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ မာ့ခ်ရှေးကို မြင်ဖူးသွားလို့ပါ၊ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံ ရိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ အနီးကပ်သွားကြည့်တယ်၊ ဘာမှတော့ မဝယ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါတွေနဲ့ ဝေးရာကို ခဏလေးထွက်လာတုန်း အခုလို အနီးကပ် ပြန်လာကြည့်တာကပဲ လွန်လှပြီ မဟုတ်လား...၊း)
အော့ချတ်လမ်းပေါ်က သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်ပြီး ပြုံးပျော်နေကြတဲ့ မျက်နှာတွေကြားမှာ ညစ်ထပ်ထပ်နဲ့ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ် မျက်နှာတစ်ခုက ကျနော့်မြင်ကွင်းထဲ ဝင်လာခဲ့တယ်၊ အမှိုက်ပုံးတွေထဲက အမှိုက်တွေကို လာသိမ်းတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်...၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ အမှိုက်တွေလိုက်သိမ်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ်၊ မဆန်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီကျွန်းကလေးပေါ်က food court တွေမှာ၊ လမ်းဘေးတွေမှာ၊ ဈေးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ.. အိုကြီးအိုမ အရွယ်ကျမှ ဆင်းဆင်းရဲရဲ အလုပ်,လုပ်နေရရှာတဲ့ အဖိုးအို၊ အဖွားအိုတွေ အကြောင်းကို မိတ်ဆွေတွေဆီက ကြားလည်းကြားဖူးထားပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မြင်နေရတဲ့အခါ မျက်စိရှေ့က အဖိုးအိုအတွက် ကင်မရာခလုတ်ကို နာနာကျင်ကျင်နဲ့ နှိပ်လိုက်မိတော့တယ်၊ ဒါဟာ စင်္ကာပူရဲ့ မျက်နှာစာတစ်ခုလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ၊ အိမ်ရှေ့က လှလှပပ ပန်းဥယျာဉ်တွေ အကြောင်းပြောရတာ ကောင်းသလို နောက်ဖေးလမ်းကြားက ရွှံ့တွေ၊ ဗွက်တွေအကြောင်းကိုလည်း ကျနော်တို့ မေ့မထားသင့်ဘူး မဟုတ်လား၊
ညနေ မစောင်းတစောင်းမှာတော့ Makansutra Gulttons Bay ကို ကျနော်တစ်ခေါက် ပြန်သွားတယ်၊ ကျနော်ရောက်ခဲ့တဲ့ညမှာ ပထမဦးဆုံး ညစာ,စားခဲ့တဲ့ နေရာလေး...၊ လရောင်တချို့တဝက် လူးပေလိမ်းကျံထားတဲ့ ကျွန်းကလေးရဲ့ လေပြေအေး ညလေးကို ပထမဦးဆုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ နေရာလေး...၊ ဒီအချိန်မှာ ဆိုင်ခန်းတွေ မဖွင့်သေးမှန်း သိပါတယ်၊ ကျနော်က နှုတ်ဆက်ရုံပဲ သွားခဲ့တာပါ၊ ရောက်တဲ့ညတုန်းကတော့ မွှေးကြိုင်ပြီး အရသာရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ ဆူညံစည်ကားနေတဲ့ ဆိုင်တန်းလေးက အခုတော့လည်း ပျင်းရိတိတ်ဆိတ်လို့...၊ ဟင်းတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်တတ်ပေမယ့် နေ့လယ်ခင်းမှာ တရေးတမော အိပ်တတ်တဲ့ အပျင်းကြီးကြီး မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တယ်...၊
၅ ညတာ အိပ်စက်အနားယူခဲ့တဲ့ အခန်းကလေးကို ကျနော် နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်၊ အခန်းကလေးက နေချင်စရာ နွေးထွေးမှုတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ ဧည့်သည်ဆိုတာ အဆုံးမှာတော့ အိမ်ပြန်ရမှာပဲ မဟုတ်လား၊ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဆည်းနေရင်းနဲ့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ တေးသွားတစ်ပိုဒ်ကို ကျနော် ဆိုညည်းနေခဲ့တယ်၊ ♫♫ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် အလင်းရောင်အခန်းလေးရေ...၊ အမှောင်လမ်းမတွေထဲကို ငါသွားတော့မယ်... ♪♪♫
နေခွင့်ရတဲ့ အချိန်လေးက တိုတောင်းပေမယ့်လို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်စရာပါ၊ ကျနော်ဆုံခဲ့ရတဲ့ အာဂန္တု ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေက stress တွေ၊ ခပ်တန်းတန်းဆက်ဆံမှုတွေ များတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေ,နေပေမယ့်လို့ ဖော်ရွေမှု၊ ခင်မင်မှု အပိုင်းမှာတော့ တစ်ရွေးသားမှ မလျော့ဘဲ တကယ့်ကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းကြတယ်၊ သူတို့တွေထဲက တချို့ကို ကျနော်မှတ်မိသလောက် နာမည်နဲ့တကွ ကျေးဇူးမှတ်တမ်း ပြုပါရစေ..၊ ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ အစစအရာရာ ချောမွေ့အဆင်ပြေအောင် အကူအညီပေးခဲ့၊ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြသူတွေ အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင်...
- SIM card ဝယ်တာအပါအဝင် ကျနော့်ကို နေ့တိုင်း၊ နေ့တိုင်း စိတ်ပူစွာနဲ့ ဖုန်းဆက်သတင်းမေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ထွန်းထွန်း၊
- သူဖတ်ဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ်ပေမယ့် ကျနော့်ဆီမှာ ဝယ်မရမှန်းသိတဲ့အခါ တစ်စက္ကန့်မဆိုင်းဘဲ လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်း သန်းနိုင်၊
- ဗာဟီရအလုပ်တွေ၊ လူမှုရေးအလုပ်တွေကို ပစ်ပြီး ကုသိုလ်ရပါစေတော့ ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို အပင်ပန်းခံ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ညီမလေးဇွန်၊ ညီမလေးညို၊ ညီမလေးခင်၊
- အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူပြီး တစ်နေကုန် နေရာစုံ လိုက်ပို့ပေးတာတောင် အားမရသေးဘဲ ̔ဧည့်ဝတ်မကျေလိုက်ဘူးဗျာ̕ ချည်း တဖွဖွပြောနေတဲ့ ကိုညိမ်း၊
- တစ်ညနေပဲ ဆုံလိုက်ပေမယ့် နှစ်များစွာ အမှတ်ရနေမယ့် ဖော်ရွေရက်ရောမှုတွေနဲ့ ကိုဖုန်းလွင်၊
- တကုပ်ကုပ် ချက်ပြုတ်နေတာတောင် အပြုံးမပျက်ဘဲ ခင်မင်စရာကောင်းတဲ့၊ အဆင်စုံအသွေးစုံ မုန့်လင်မယားတို့ရဲ့ ဖန်တီးရှင် ညီမ မဒမ်ကိုး၊
- အိမ်လာလည်တဲ့ ဧည့်သည်တွေ ဗိုက်ပြည့်သွားစေချင်တဲ့ စေတနာတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေလွန်းတဲ့ ကိုခင်မောင်ဦး၊ မသန္တာလွင်၊
- လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ နာမည်ကြီးဘလော့ဂါ ဖြစ်ပေမယ့် မာန်မာနမရှိ၊ ဟိတ်ဟန်မရှိဘဲ ဖော်ရွေစွာနဲ့ လာနှုတ်ဆက်တဲ့ အစ်မခင်ဦးမေ၊
- ကျနော်စားချင်သမျှ မြန်မာအစားအစာတွေ လိုက်ကျွေးတဲ့အပြင် ကင်မရာပစ္စည်း ဆိုင်တွေကိုပါ ညွှန်ပြပေးတဲ့ စာဖတ်သူ ညီ၊
- တစ်ထမ်း၊ တစ်ရွက်နဲ့ တက်ညီလက်ညီ ရှိလှတဲ့၊ လူတစ်ဖက်သားကို အမြဲကူညီချင်တဲ့ နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြ အစ်ကိုဝင်းနိုင်၊ အစ်မချစ်ကြည်အေး၊
- မြင်လိုက်တာနဲ့ ̔မိသားစု̕ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ပိုပြီးခံစား၊ နားလည်သွားစေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အစ်မသက်ဝေတို့ မိသားစု၊
- တိုးတိုးညင်သာနဲ့ ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညီငယ် Evergreen ဖြိုး၊
- အလုပ်တွေ ရှိတဲ့ကြားက အချိန်လုပြီး ရောက်လာခဲ့တဲ့ မသိမ့်၊
- ဘယ်အချိန် ပြန်ဖတ်ဖတ်၊ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားနိုင်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လို သစ်လွင်တဲ့ ဖော်ရွေမှုတွေနဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုတင်မင်းထက်၊
- အားလုံးအတွက် အမှတ်ရစရာ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုကျော်စိုးမင်း၊
- အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ မအားတဲ့ကြားက ရတဲ့ညနေခင်းလေးမှာ မဖြစ်မနေ ညစာစီစဉ်ခဲ့တဲ့၊ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ စည်သူ၊ ဥမ္မာ၊ စံပယ်၊ ပပ၊ ဖြိုးအောင်ထွန်း၊
- စင်္ကာပူမှာ မနေပေမယ့် အဝေးကနေ ဝမ်းသာအားရ တကူးတက ဖုန်းဆက်ပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့ ညီငယ် မောင်မျိုး၊
- သား ၂ ယောက်နဲ့အတူ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေ များလှတဲ့ကြားက မဖြစ်မနေ ဖုန်းနဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့ sonata-cantata မသီတာ၊
- နေမကောင်းလို့ ချောင်းတွေ ဆိုးနေပေမယ့် ဖုန်းဆက်ပြီး ဧည့်ဝတ်ကျေခဲ့တဲ့ ညီမ ကဗျာသင်္ခါရ၊
- sms လေးပို့ပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မယုမွန်၊
- ဖုန်းနဲ့တမျိုး၊ sms တွေနဲ့တသွယ် နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ အမည်မသိခဲ့ရတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ၊
- နောက်... ကျနော့်ရဲ့ အားနည်းချွတ်ချော်မှုကြောင့် ဖော်ပြဖို့ ကျန်ကောင်း၊ ကျန်နေခဲ့နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ...၊
သူတို့အားလုံးရဲ့ ခင်မင်ဖော်ရွေမှုနဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေမှု တွေအတွက် ချစ်ခင်အမှတ်ရစွာနဲ့ ကျေးဇူးစကား ဆိုချင်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေနဲ့သာ မတည်ဆောက်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်၊ သူတို့ရဲ့ အပြုံးတွေနဲ့သာ မညွတ်ပျောင်းစေခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဟောဒီကျွန်းကလေးကို လာရတဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ အခုလို အမှတ်တရ ဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့အားလုံးရဲ့ စေတနာကို အရင်းခံတဲ့ ခင်မင်မှုဟာ ခေါင်းပေါ်က နေနဲ့အပြိုင် တောက်ဖြာ၊ နွေးထွေးပြီး ကျနော့်ရင်ဘတ် တစ်ခုလုံးကို လင်းစေခဲ့တယ်၊
တကယ်တော့ တားမြစ်ထားမှုတွေ ရှိလင့်ကစား... ကျနော်ကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလား အမိခံချင်တဲ့ ငါးတစ်ကောင်ပါ၊ စည်းကမ်းချက်တွေ အတော်အသင့် များလှတဲ့ ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ နေကြသူတွေပီပီ အာဂန္တု ကျွန်းသူကျွန်းသား တွေကတော့ စည်းကမ်းကို လိုက်နာပြီး ကျနော့်ကို မျှားချင်မှ မျှားကြမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကမ်းနားမှာ မထိုင်၊ ငါးမျှားတံကို မကိုင်ပါဘဲနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲက ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေက ကီလိုမီတာ ထောင်ချီတဲ့အရပ်က ကျနော့်ကို စွေ့ကနဲ မျှားသွားခဲ့တော့တယ်၊ အဲဒီ ချစ်ခင်မှု ငါးမျှားချိတ်လေးကို ပါးစောင်မှာကိုက်ပြီး သွားခဲ့မိတဲ့ ခရီးစဉ်လေးက ကာလများစွာတိုင် အမှတ်တရနဲ့ ရှိနေတော့မှာ အသေအချာပါပဲ...၊ ကျွန်းကလေးရဲ့ ခရီးစဉ်ကို အခုလို အဆုံးရောက်တဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး စောင့်ဖတ်ခဲ့ကြတဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ အယောက်တိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား...။ ။
Posted by ညီလင်းသစ် au 29.4.13 33 comments
(အမှန်တော့ ဒီခရီးသွားပို့စ် အဆက်ကို ဟိုတစ်နေ့ကတည်းက တင်ဖို့ရှိပေမယ့် ကြားဖြတ်ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်လိုက်ရတာနဲ့ ဒီနေ့ကို နောက်ဆုတ်လိုက်ရတာ၊ ပြီးတော့ အဲဒီကြားဖြတ် ပို့စ်ကလည်း တင်မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ တစ်ရက်တည်းသာ တင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပို့စ်အမျိုးအစား ဖြစ်နေလို့...၊ ဒါပေမယ့် လာလည်ကြသူတွေက သမာဓိအား ကောင်းနေကြတော့ ကျွန်းကလေးလည်း ရေမမြုပ်လိုက်ဘူး ဆိုပါတော့ဗျာ..၊ အိုကေ.. ဆက်လိုက်ရအောင်)းD
စာပေဟောပြောပွဲပြီးတဲ့ နောက်တစ်ရက်မှာမှ ကျနော့်ရဲ့ အလည်အပတ် ခရီးစဉ်က တကယ်ပဲ စဖြစ်တော့တယ်၊ အဲဒီနေ့မှာ ကျနော့်ကို လိုက်ပို့တာက ကိုညိမ်းနိုင်ပါ၊ ကျနော်က တစ်ယောက်ထဲလည်း လည်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုနေတဲ့ကြားက ခွင့်ရှားပါးတဲ့ နိုင်ငံမှာ ခွင့်တစ်ရက်ယူပြီး သေသေချာချာ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ကိုညိမ်းကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ၂ ယောက် အရင်ဦးဆုံး Raffles City မှာ အေးအေးဆေးဆေး ကော်ဖီဝင်သောက်လိုက် သေးတယ်၊ ပြီးတော့မှ ပထမဦးဆုံး ချီတက်သွားတာက Gardens by the bay...၊
Gardens by the bay ကို Marina Bay Sands ဖက်က တံတားပေါ်ကနေ လှည့်ဝင်ပါတယ်၊ အဲဒါမတိုင်ခင် တစ်ရက်မှာ အစ်မချစ်ကြည်အေးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တုန်း အဲဒီတံတားပေါ်ကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် လှတဲ့အကြောင်း သူက အကြံပေးတာနဲ့ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီဖက်က လှည့်ဝင်ဖြစ်တာပါ၊ အရေးထဲ အဲဒီတံတားပေါ်ကို တက်ဖို့လမ်းကို ရှာမရဘူး ဖြစ်နေသေးတယ်၊ ဟိုမေးဒီစမ်း၊ ဟိုဆိုင်းဘုတ်၊ ဒီဆိုင်းဘုတ် လိုက်ဖတ်ပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်နေမှ အပေါ်ကို တက်နိုင်တော့တယ်၊ အစ်မချစ် ပြောတဲ့ အတိုင်း တံတားပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက တော်တော်လှပါတယ်၊ ဒါတောင် မနက်ပိုင်း ဖြစ်နေတဲ့အပြင် တိမ်တွေက အုံ့ဆိုင်းထူထပ်နေလို့ ကျနော်လိုချင်တဲ့ အလင်းမရခဲ့ဘူး၊ တိမ်ကင်းစင်တဲ့ ညပိုင်းတွေဆို ပိုပြီးလှမှာ သေချာတယ်၊ Anyway.. thanks Ama Chit! This photo is dedicated to you. :)
တိမ်တွေထူပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မကောင်းပါဘူးဆိုမှ ပန်းခြံထဲရောက်တော့ dome နှစ်ခု ရှိတဲ့အထဲမှာ Flower Dome က ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ ပိတ်ထားတဲ့ ရက်နဲ့မှ သွားတိုးနေပြန်ရော..၊ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ဘေးက Cloud Forest တစ်ခုကိုပဲ ဝင်လိုက်ရတယ်၊ ဝင်ဝင်ချင်းမှာ တောင်ကုန်းလေးလို လုပ်ထားတဲ့အပေါ်ကနေ ရေတံခွန်လေးတစ်ခု ကျနေတာ တွေ့ရတယ်၊ အဲဒီကကျတဲ့ ရေက အငွေ့တွေရယ်၊ green house effect လို လုပ်ထားတာရယ်ကြောင့် တိမ်စိုင်၊ မြူခိုးတွေ ဝေနေသလို ဖြစ်နေတယ်၊ “တိမ်တောအုပ်” လေးထဲကို ဝင်လိုက်ရသလိုပါပဲ၊ မျောလွင့်တိမ်တို့ နားခိုရာ ကိုညိမ်းကတော့ တိမ်တောအုပ်လေးကို သဘောတွေ ကျနေမလားလို့ ကျနော် ဖြတ်ကနဲ တွေးမိလိုက်သေးတယ်..၊
ဒီဟာက Red pitcher plant လို့ ထင်တာပဲ၊ အသားစားတဲ့ အပင်လေ..၊ ယင်ကောင်၊ ပိုးကောင်လေးတွေဆို သူတို့အကြိုက်ပေါ့..၊ အဲ.. လာလည်ကြတဲ့ လူတွေကတော့ ယင်ကောင်မဟုတ်လို့ ဒီအပင်လေးတွေကို မကြောက်ကြတဲ့ ပုံပါပဲ၊ အထဲကို တုတ်တွေနဲ့ ထိုးကြပုံရတယ်၊ “အပွင့်ထဲကို တုတ်နှင့်မထိုးရ” ဆိုတဲ့ သတိပေးစာတန်း ကပ်ထားတာ တွေ့မိတယ်...၊
Flower Dome လောက် ပန်းတွေ မစုံပေမယ့် မြင်ရသလောက်လေးကို ကျနော် အမှတ်တရ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..၊ ကိုယ်က စိတ်တိုင်းမကျလို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာမယ်လို့ ပြောခွင့်မရှိတဲ့ ဘဝကိုး...၊း)
အများစုကတော့ သစ်ခွပန်းတွေ များပါတယ်..၊ ဘာသစ်ခွလဲ ဆိုတာတော့ မမေးကြေးနော်...၊း) ကျနော်က ပန်းဆို ပန်းဂေါ်ဖီလောက်ပဲ ကောင်းကောင်းသိတာ...၊
သစ်ပင်ပန်းပင်တွေကို အခုလို တောင်ကုန်းပုံစံ လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးထဲမှာ စိုက်ထားတာပါ၊ အပြင်ဖက်ကို ထွက်လျှောက်လို့ရအောင်လည်း လျှောက်လမ်း ၂ ခု လုပ်ထားပေးတယ်၊ Dome အထဲမှာက ရေတံခွန်က ရေကျသံတွေ၊ သစ်ပင်ပန်းပင်တွေရဲ့ စိမ်းစိုတဲ့ မြင်ကွင်း၊ စိုစွတ်တဲ့ အငွေ့အသက်.. စတာတွေနဲ့ဆိုတော့ မိုးသစ်တောလေး တစ်ခုထဲကို ရောက်နေရ သလိုပါပဲ..၊ ̔မိုးငွေ့နှင့်အတူ̕ လည်ပတ်နိုင်တဲ့ နေရာလေးပါ...၊း)
အထဲမှာ လျှောက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ သူ့ကိုလည်း တွေ့ရတယ်၊ ဘယ်နေရာသွားသွား မလွတ်နိုင်ဘူး ထင်ပါရဲ့..၊ နေရာတိုင်းမှာ သူ့မျက်နှာဆိုတာ ဒါများလား..၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေ လာ,လာဓါတ်ပုံရိုက်ကြလွန်းလို့ သွေးကြီးပြီး မိုးပေါ်ပျံတက် ချင်နေတဲ့ သင်္ဘောကြီးကို ကျနော့်နည်း ကျနော့်ဟန်နဲ့ ဘောင်ခတ် ပစ်လိုက်တယ်..၊း)
အဲဒီ တောင်ကုန်း အဆောက်အဦးလေးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အခန်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်၊ +5° C လို့ နာမည်ပေးထားတယ်၊ ကမ္ဘာ့အပူချိန်က နှစ်အလိုက် မြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်လို့ သက္ကရာဇ် ၂၁၀၀ မှာ ကမ္ဘာကြီးက ပျမ်းမျှခြင်း ၅ ဒီဂရီ ပိုပြီးပူမယ့် အကြောင်း သတင်းဇတ်ကားလေးလို ပြထားတာ..၊ နှစ်တွေတိုးလာလေလေ၊ အပူရှိန်က မြင့်တက်လာလေလေ၊ နေရာတကာမှာ ရေတွေကြီး၊ လူတိရစ္ဆာန်တွေ သေကြတာတွေကို မြင်ရတယ်၊ ၂၁၀၀ အရောက်မှာတော့ ၅ ဒီဂရီ ပြည့်တဲ့အထိ ပိုပြီးပူမယ်ပေါ့..၊ စာပေဟောပြောပွဲ မှာ ဆရာမြင့်မောင်ကျော်ကလည်း ဒီအကြောင်းကို ထည့်ပြောသွားသေးတယ်၊ သူကတော့ ၆ ဒီဂရီလို့ ပြောတယ်၊ ၅ ဖြစ်ဖြစ် ၆ ဖြစ်ဖြစ်.. ပိုပြီး ပူလာမှာကတော့ အသေအချာပဲ..၊ အဲဒီအချိန် ကျနော်တို့ မရှိတော့လို့ ဒါတွေကို မကြုံရဘူး ဆိုပေမယ့် နောက်မျိုးဆက် ကလေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ နေပျော်စရာ တစ်စက်မှ မရှိတော့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ထည့်ခဲ့မှာလား? ဇတ်လမ်းကလေးကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ "Think global, Act local" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို သတိရနေ မိတယ်...၊
လောလောဆယ်မှာတော့ စိမ်းစိုနေဆဲ အငွေ့အသက်လေးတွေနဲ့ နီနီရဲရဲ ချစ်စရာ ပန်းလေးတွေ ကျနော်တို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေပါသေးတယ်...၊ Never too late to mend လို့လည်း ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား..၊
Gardens by the bay ကနေ ပြန်ထွက်လာတော့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲနေပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့ Flower Dome ပိတ်ထားတာကပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ၊ အခု Cloud Forest တစ်ခုတည်းနဲ့တင် တစ်မနက် ကုန်သွားခဲ့တာ...၊ နေ့လယ်စာ ထမင်းစားဖို့ Gardens by the bay ကနေ ပင်နီဆူလာကို ကျနော်တို့ လမ်းပြန်လျှောက်တယ်၊ ကျနော့်မလဲ စင်္ကာပူတစ်မြို့လုံးမှာ ထမင်းစားစရာ နေရာဆိုလို့ ပင်နီဆူလာ တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ အောက်မေ့နေတာလားလို့ မေးရမလို ဖြစ်နေပြီ၊ ထစ်ကနဲဆို မြေအောက်ထပ်က စားသောက်ဆိုင်လေးတွေပဲ ပြေးပြေးမြင်နေ မိတော့တယ်၊ ကိုညိမ်းက ကျနော့်ကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းရမှာ အားနာနေပုံရတယ်၊ ရထားစီးရအောင်ချည်း လုပ်နေတော့တာ..၊ ကျနော်ကလည်း သူ့ကို ပြန်အားနာနေရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက ကျနော့်ကို လိုက်ပို့တဲ့အပြင် ကျနော်ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာ မှန်သမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ပေးနေတာကိုး..၊ ဓါတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ သွားရတာ အင်မတန်ပျင်းဖို့ ကောင်းပါတယ်၊ သူတို့က သူတို့ဟာသူတို့ ဇောကပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့ချင်မေ့နေတတ်တာ ကလား၊ ဒါ့အပြင် ကိုညိမ်းက ကျနော့်ရဲ့ ကင်မရာအိတ်နဲ့ ထရိုင်ပေါ့ကို သယ်ပေးသေးတယ်၊ ကင်မရာအိတ်က ၁၁ ကီလို လေးပါတယ်၊ မသယ်ပါနဲ့ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုမှ ပြောမရ...၊ တိမ်တွေကို ချစ်တတ်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်မှာ ဧည့်သည်ကို ဧည့်ဝတ်ကျေချင် စိတ်နဲ့ ပေကပ်ကပ်လုပ်ပြီး ခေါင်းမာလိုက်ဖို့ ဝန်မလေးတာကို တွေ့ရတော့ ကျနော့်မှာ သဘောတကျနဲ့ အလျှော့ပေးလိုက်ဖို့အပြင် အခြားမရှိတော့ဘူး...၊
ကဲ...ကြည့်ပါဦး ကျနော့်ရဲ့ နေ့လယ်စာကို...၊ နရသီဟပတေ့ တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူ့ထက်မလျော့တဲ့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခြင်းတွေနဲ့ ကျနော် ပွဲတော်တည်...အဲ.. ထမင်းစားခဲ့တယ်..၊း)
ပြောကြစတမ်းဆို ဟောဒီ ချဉ်ပေါင်ကြော်လေး တစ်ခွက်စားရဖို့ ဆိုရင် နောက်ထပ် ၁၇ နာရီလောက် လေယာဉ်ထပ်စီး ဆိုလည်း ကျနော် စီးဖို့ ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်သာ အကယ်၍များ ကျွန်းကလေးကို အလုပ်တာဝန်နဲ့ ပြောင်းလာရမယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး တစ်လမှာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း.. ရနံ့သစ်က ချဉ်ပေါင်ကြော်တစ်ခွက် လာလာစားဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်...၊း) အို...ချစ်သော ချဉ်ပေါင်...။
ထမင်းစားပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဆင်တိုစာကို ဆက်သွားကြတယ်၊ ဆင်တိုစာကတော့ ထုံးစံပဲ ထင်ပါရဲ့...၊ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် လူတွေအပြည့်ပါပဲ..၊ ဒါတောင် တနင်္လာနေ့မို့ လူနည်းသေးတာလို့ သိရတယ်..၊
အာရှရဲ့ အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ သမုဒ္ဒရာပြတိုက် Underwater World ကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ငါးအမျိုးအစား အတော်လေးစုံအောင် ပြထားတာ တွေ့ရတယ်၊ ငါးတွေကို မှန်ခန်းထဲမှာ ကြည့်ရတာ မဟုတ်ဘဲ ငါးကန်ကြီးရဲ့ အောက်မှာ လှိုဏ်ခေါင်းလိုမျိုး ဖောက်ထားပြီး အဲဒီတစ်လျှောက် ကြည့်ရတာ အမြင်ကို တစ်မျိုးဆန်းသစ်စေတယ်၊ စင်္ကာပူဟာ သူ့မှာရှိတဲ့ နည်းပညာနဲ့ လူသားရင်းမြစ်ကို အပြည့်အဝ အသုံးချပြီးတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖက်မှာပါ ပိုပြီး ဆွဲဆောင်လာတာကို တွေ့ရတယ်၊ တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် တက်လာနေတဲ့ အာရှကျားတွေကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ စီးပွားရေး စစ်မျက်နှာဖွင့်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်တယ်...၊
ပင်လယ်ခူတွေကို မီးရောင်မျိုးစုံနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်အောင် ပြထားတာတွေ့တော့ ကျနော် သဘောကျသွားမိတယ်၊ Art of display က အရေးပါတယ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး ဥပမာပါပဲ...၊
အဲဒီမှာ ဖျံနဲ့ လင်းပိုင် ပြပွဲလေးလည်း ကြုံတာနဲ့ ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်၊ မိသားစုတွေ၊ ကလေးတွေ အများကြီးနဲ့ ပျော်စရာ အခင်းအကျင်းလေး ပါပဲ၊ ဘော်လုံးဖမ်းတာ၊ ပလပ်စတစ် ကွင်းတွေကို လိုက်ဆယ်တာ.. စတာတွေမှာ ဖျံလေးတွေက သူတို့ကို သင်ထားပေးတဲ့ အတိုင်း အတိအကျ လုပ်နိုင်တာ သဘောကျစရာပါ...၊
လင်းပိုင်တွေလည်း ထို့အတူပါပဲ..၊ ကြိမ်ကွင်းထဲ ခုန်ဝင်တာ၊ လေထဲက ဘော်လုံးကို ရိုက်ချတာ... စတဲ့ ပြကွက်တွေနဲ့ ကလေးတွေကို ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်စေတယ်..၊ အမျိုးအစား မတူပေမယ့် ကျနော်တို့ဆီက ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကိုလည်း ဖြတ်ကနဲ သတိရလိုက် မိတယ်၊ သူတို့တွေကတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ မျိုးတုန်းလာနေပြီလို့ တလောဆီက သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်၊ တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ၊ ပြန်ပြီး အဖတ်ဆယ်လို့ မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်လောက်တောင်များ ရှိနေခဲ့ပြီလဲ၊
အာရှတိုက်ရဲ့ တောင်ဖက်အကျဆုံး ဆိုတဲ့ Southern Most Point ကျွန်းကလေးဆီလည်း ကျနော်ရောက်သွားတယ်၊ ညီမလေး ဇွန်မိုးစက်က ဆင်တိုစာရောက်ဖြစ်ရင် အဲဒီကိုလည်း သွားကြည့်လိုက်ပါဦးလို့ အကြံပေးတာနဲ့ ကျနော်လည်း သွားရကောင်းမှန်း သိသွားခဲ့တာ..၊ ကျွန်းကလေးဆီကို လာတဲ့ခရီးမှာ နောက်ထပ် ပိုပြီးသေးတဲ့ ကျွန်းကလေးကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျနော် သဘောကျသွား မိတယ်၊ ကျွန်းလေးပေါ်မှာ twin towers ကိုလည်း တွေ့တော့ သွားတက်မယ်လို့ ချက်ချင်းပဲ စိတ်ကူးရတယ်၊ အင်း.. ဒီ twin towers ဆီတော့ လေယာဉ်ပျံတွေ မလာလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့..၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သစ်ပင်တွေ အုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ ချစ်စရာ ကျွန်းပိစိကလေးဆီ လာဖို့ ညွန်းခဲ့တဲ့ ညီမလေးဇွန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ This photo is dedicated to you, Nyi Ma Lay. :)
ကျွန်းပိစိကလေးဆီကို ကြိုးတံတားနဲ့ ကူးရပါတယ်၊ သာမန် သစ်သားတံတား၊ ဒါမှမဟုတ် အင်္ဂတေတံတား မဟုတ်ဘဲ အခုလို ကြိုးတံတားလေး လုပ်ထားတာကိုက ကျွန်းကလေးဆီကို ပိုပြီး လာချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေသလိုပါပဲ..၊
စောစောတုန်းက တွေ့ထားတဲ့ သစ်သားမျှော်စင်လေး တစ်ခုပေါ်တက်လိုက်တော့ လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်ရတယ်..၊ ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ငေး ကြည့်နေရင်းနဲ့ ဒါဟာ စင်္ကာပူကို အထိုက်အလျောက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုလို့ ကျနော် ခံစားလာရတာနဲ့ ဒီဓါတ်ပုံလေးကို ရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပါ၊ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သစ်ပင်တွေ ရှိမယ်၊ ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်လို့ သဲမြေနဲ့ ကမ်းခြေတွေ ရှိမယ်၊ ထုနဲ့ထည်နဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ရှိမယ်၊ မြင်လိုက်တာနဲ့ ဒါ စင်္ကာပူလို့ လူတိုင်းသိစေတဲ့ Merlion ကြီးလည်း ရှိမယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒါတွေ အားလုံးရဲ့ အရှေ့မှာ လုံခြုံရေးကင်မရာကလည်း ထင်ထင်ရှားရှားကို ရှိမယ်၊ ဒါဟာ.. ကျနော် လာချင်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးပဲ မဟုတ်လား...၊
ကဲ..မိတ်ဆွေ, ဘယ်ဆီကိုများ ကြည့်ချင်ပါသလဲ? အင်ဒိုနီးရှားလား? ဒါမှမဟုတ် ပိုဝေးတဲ့ သြစတြေးလျလား? အကြွေစေ့လေး အနည်းငယ်ထည့်ရုံနဲ့ ခြေတစ်လှမ်းမှ ကြွစရာ မလိုဘဲ ဇော်ဂျီများ မြေကြောရှုံ့သလို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချက်ချင်း ရောက်သွားစေ ရမယ်၊းD
“မကြာခင်မှာ နေဝင်တော့မယ်...၊ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တာဟာ အလိုတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ အဆုံးသတ်ရဦးတော့မယ်၊ ဟိုး... ပင်လယ်ထဲမှာတော့ သင်္ဘောကြီးငယ်တွေက ဝင်ချည်၊ ထွက်ချည်နဲ့ အမြဲမပြတ် ရှိနေမှာပဲ..၊ နေဝင်ချိန်တွေ များစွာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ နောက်ထပ်လည်း နေဝင်ချိန်တွေ အများကြီး လာလိမ့်ဦးမယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်... အာရှတိုက်ရဲ့ တောင်ဖက်အကျဆုံး နေရာကလေးမှာ မြင်ခွင့်ရတဲ့ နေဝင်ချိန်လေး တစ်ခုကို ငါ့ရဲ့ ဖုန်းကလေးထဲမှာ ရပ်တန့်၊ သိမ်းဆည်းထားလိုက် ပါရစေကွယ်...” ၊ သူမ အဲဒီလိုများ တွေးနေမလားလို့ ကင်မရာရဲ့ view finder ကနေ ကြည့်နေရင်း ကျနော် စဉ်းစားနေမိတယ်...၊
ည ၇ နာရီမှာတော့ ဆင်တိုစာရဲ့ နာမည်ကြီး Songs of the sea ပြပွဲကို ကြည့်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီပွဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အစောကြီးကတည်းက ကျနော် စိတ်ကူးထားခဲ့တာပါ၊ အဲဒါကြောင့်လည်း တစ်နေကုန် ထရိုင်ပေါ့ကို သယ်ပြီး လျှောက်သွားနေခဲ့တာ၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကောင်းကင်မှာ မိုးသားတွေက တက်လာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် လေကလည်း တိုက်နေတော့ ရွာချင်မှ ရွာမှာပါလေဆိုပြီး တွေးမိတယ်၊ ရှိုးပွဲလုပ်တဲ့ ကမ်းစပ်ဖက်ကို ဝင်တဲ့အပေါက်မှာတော့ လက်မှတ်တွေစစ်ရင်း တစ်ယောက်ကို ပလပ်စတစ် မိုးကာလေး တစ်ထည်စီ ပေးနေတာတွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ထင့်သွားတယ်၊ ဒါနဲ့ သေချာအောင် ̔ဒီမိုးကာက ဘာလုပ်ဖို့လဲ̕ လို့ မေးတော့ ̔မိုးရွာရင် ဝတ်ရအောင်ပါ̕ တဲ့...၊ ကျနော် အတော်လေး စိတ်ညစ်သွားတယ်၊ ဒါဆိုရင်တော့ ရွာတော့မယ် ထင်ပါရဲ့၊ ကျွန်းသားတွေက သူတို့ကျွန်းမှာ ရွာတတ်တဲ့ မိုးအကြောင်းကို အသိဆုံး ဖြစ်မှာပေါ့...၊ တကယ်တမ်းမှာလည်း ခုံတန်းတွေမှာ ထိုင်ပြီး ရှိုးမစခင်မှာပဲ မိုးက အကြီးအကျယ် ရွာချလိုက်ပါတော့တယ်..၊
မိုးစက်တွေအောက်မှာ အလင်းတွေ အမျိုးမျိုးသုံးပြီး ကစားတဲ့ Songs of the sea ကို ကြည့်နေရင်း ကျနော့်မှာ ရယ်ရအခက်၊ ငိုရအခက်နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့တော့တယ်၊ စင်္ကာပူကို မလာခင်မှာ နေ့တိုင်းလိုလို မိုးရွာနေတယ်လို့ မိတ်ဆွေတွေက ပြောကြတယ်၊ ကျနော်တော့ ကံမကောင်းဘူးပေါ့လေ..၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ရောက်တဲ့ သောကြာနေ့ ညနေကစပြီး ရက်ဆက်ဆိုသလို နေတွေသာပြီး ကောင်းကင်ပြာတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့ သူတို့လည်း အံ့တွေသြပြီး ကျနော့်အတွက် ဝမ်းတွေသာလို့ပေါ့၊ ကျနော်ကတောင် နောက်နေသေးတယ်၊ ကျနော် မလာခင်က ဘယ်လိုပဲရွာရွာ စင်္ကာပူမိုးဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီလိုပဲ တိတ်သွားရမယ်လေ ဆိုပြီး...၊ အမှန်တော့ မိုးက သူ့ကို မထီလေးစား လုပ်ချင်တဲ့ ကျနော့်ကို ဆုံးမဖို့ အကွက်ကောင်းကို ချောင်းနေခဲ့တာ..၊ အခုတော့ ကျနော်စောင့်နေခဲ့တဲ့ Songs of the sea ပွဲတည့်တည့်မှာမှ ရွာချပစ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့လည်း ကြည့်ဦး..၊ ကျနော် မလူးသာမလှုပ်သာ ဘယ်နေရာကိုမှ ထွက်ပြေးပြီး မိုးခိုလို့ မရတဲ့ အချိန်မှာမှ ရွာတာ...၊ ရှိုးပွဲက ပြနေတာဆိုတော့ ကျနော့်မှာ ပါလာတဲ့ ထီးကလေးကိုတောင် ထုတ်ဆောင်းခွင့် မရခဲ့ဘူး၊ အနောက်ကလူတွေ ကွယ်သွားမှာစိုးလို့၊ ဖြစ်ပုံများတော့ အဲဒီလို...၊ ဒီပုံလေးအတွက် ကိုညိမ်းကို ခရက်ဒစ် ပေးပါတယ်၊ မိုးကာအင်္ကျီလေး အောက်ကနေ ရသလောက် သူက ဖုန်းလေးနဲ့ ရိုက်ထားခဲ့တာ...၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီအချိန်ပိုင်းလေး မိုးမိသွားတာကလွဲရင် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေပါတယ်၊ သွားလေရာမှာ မိုးလိုက်လို့ ရွာနေခဲ့တဲ့ ကံဆိုးမ မဖြစ်ခဲ့တာ ဝမ်းသာစရာပါ၊ ပြီးတော့ တစ်နေ့တည်းမှာ နေရာတွေ အများကြီးကို ရောက်ခဲ့တာကလည်း ပျော်စရာပဲပေါ့...။
(ကဲ...ဒီတစ်ပုဒ်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ၂၃ ပုံတောင် တင်လိုက်ပါတယ်၊ April Fool မှာ စိတ်ထဲ စနိုးစနောင့် ဖြစ်သွားခဲ့သူတွေ ကျေပါပြီနော်..၊း) နောက်တစ်ပိုင်းကိုလည်း ဆက်လိုက်ခဲ့ပါဦး၊ ကျွန်းကလေးက ရေမြုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး...)
၃ ဧပြီ၊ ၂၀၁၃
Posted by ညီလင်းသစ် au 3.4.13 38 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 1.4.13 33 comments